Dadka deggan Baladweyne oo doortay duq magaalo oo cusub - Sabahionline.com
Dadka deggan Baladweyne oo doortay duq magaalo oo cusub
Beledweyne ayaa leh duq magaalo oo cusub oo ay doorteen wakiillada dadku, sida uu Isniintii (7-da May) weriyey Raadiyaha Bar-Kulan ee ay maal-galiso QM.
Soomaaliya oo isu-diyaarinaysa doorashadii ugu horreysay ee madaxweynanimo ee ka dhacda Muqdisho
Gudiga doorashooyinka Kenya oo tababaraya arday koormeerayaal ah
Kooxaha xuquuqda insaanka oo ka digay rabshado daran oo ka iman kara doorashooyinka Kenya
Maxamed Xasan Nuuriye ayaa 135 cod ka helay guud ahaan tirada ergada codaysay oo dhammayd 200, isaga oo sidaa uga guulaysaty labadii musharrax ee la loollantay oo iyagu kala helay 11 iyo 8 cod. Ku-xigeenka Nuuriye ayaa isagana waxa u helay 147 ka mida 200 ee cod.
Duqa cusub ayaa u mahad-celiyay cod-bixiyayaasha waxana uu ballan-qaaday in uu ka shaqayn doono maslaxadda guud ah ee dadka.
Mid ka mida tallaabooyinkii ugu horeeyay ee uu qaaday Talaadadii, ayuu Nuuriye waxa uu sharci-darro ka dhigay in hubka lagu qaato magaalada dhexdeeda, marka laga reebo ciidamada ka shaqaynaya howl-gallada ammaanka. Sidoo kale waxa uu amray in ciidamada dawladdu ay xarumahooda ku ekaadaan sababo la xiriira ammaanka dartood.
Saadaq Cumar Sabriye oo ah madaxa guddiga doorashooyinka Hiiraan, ayaa sheegay in doorashadu ahayd mid furan oo caddaalad ah, iyada oo ay meesha ka marnaayeen wax eex iyo iilasho ah oo ku dhisan qabyaalad.